Quruxda Afrikaanka Madow: marna ha taaban aqoonsigeenna, maxaa yeelay waa miyirkeenna shalay, maanta iyo berri. “Kaliya dhiig, qoys, taariikh, waqtiga ayaa lagu gartaa qofka aadanaha ah; dhiiggu waa kaarka aqoonsiga ugu fiican ”
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 26, 2020 00: 00 No Comments
Halka iyada hore looga bartay New York, Eugene Bullard iyada ayaa timid bishii Meey 1924 si ay ugu soo bandhigto cabaret uu faray, Le Grand Duc (geeska jidadka Fontaine iyo Pigalle). Si dhakhso leh, dadka caanka ah ee adduunka oo idil waxay ku qulquleen macbudkan jazz halkaas oo ay ku yaalliin darsin miisas ah oo keliya.
Saaxiib Cole Porter, oo ku sugnaa Paris, oo u qortay heeso, Lebenka dushiisa wuxuu ku guuleystey Grand Duke, isagoo soo bandhigey Charleston iyo Blackbottom. 1927, waxay iibsatay aasaaskii, oo ay ka iibisay Bullard sanadkii xigay oo uu aasaasay kooxdiisii, Chez Lebenka, (66 rue Pigalle).
Lebenka dushiisa guursaday 1928 saxophonist Peter Duconge. 1938-1939, Lebenka dushiisa, oo xoogan oo caan ku ah, ayaa barnaamij idaacad ku qabtay magaalada Paris. « Lebenka dushiisa muuqaal gaaban ayuu ka sameeyaa Zelig, Filim uu qoray Woody Allen. Agaasimaha sidoo kale wuxuu ku sharfayaa isaga gudaha barka magaalada Paris! »
Wax ka beddelka jirka: Madowga / Afrikaanku had iyo jeer waa ku dayan jireen, laakiin weligood ma simin; sidii caadada u ahayd, markay madow / Afrikaanku wax bilaabaan, kuwa kale ayaa marka hore ku qosla iyaga, ka dibna ka dib ku dayda iyaga oo xitaa raba inay la wareegaan wixii ay madowga / Afrikaanka bilaabeen
Oct24 05: 09
HI / LO: 11/9 ℃
Mareykanka, waddanka garsoorayaasha cunsuriyadda iyo caddaalad darrada ah: Caddaan Mareykan ah ayaa jecel Afrika, laakiin ma jecla Madow / Afrikaanka; Mareykanka Mareykanka, waxa loogu yeero Awoodda Weyn, waddan xushmeeya xuquuqda aadanaha, waddan caddaalad ah, macallinka heer sare ee dimoqraadiyadda iyo dowlad wanaagga, waddanka loogu yeero badbaadiyaha ee Madowga Afrika ayaa riyoonaya oo sugaya inay yimaadaan oo ka xoreeyaan cidda garaneysa waxa ama cidda (...) kaliya hooska nafteeda
Oktoobar 23, 2020 15: 15
Dalka Mareykanka, isagoo ku doodaya addoonsiga, ninkii Ilaah Louie Giglio wuxuu soo jiitay mudaaharaadyo badan: intii lagu gudajiray guddi dib-u-heshiisiin midab ah oo ka dhacay heerka Kaniisadda "Passion City Church", wadaadka Atlanta Louie Giglio waxay tiri addoonsiga waa in loo arkaa inuu yahay "Barako" Caddaanka… (VIDEO)
Oktoobar 23, 2020 03: 33
Markay Caddaayaasha / Reer Galbeedku ka hadlayaan waxa loogu yeero Qorniinka quduuska ah ama buugaagta xurmada leh, waxay ku xardhayaan astaamaha Kitaabka Qudduuska ah, waxay u soo bandhigaan inuu yahay mid ka mid ah buugaagta adduunka ugu karaamada badan: runti? Ma dhabaa mise waa kaftamayaan?
Oktoobar 23, 2020 00: 00
Si xun u istcimaalka shabakadaha bulshada, lamaane ayaa dharbaaxay gabadhooda "Sida markii waxbarashadu wali waxbarashada ahayd, markay waalidku si sax ah u gutaan kaalintii aabenimo, aabe iyo hooyo ayaa garaacay gabadhooda ku xadgudubka isticmaalka shabakadaha bulshada ”… (VIDEO)
Oktoobar 22, 2020 10: 10